Hargaysa iyo Xabsigii abuu qurayb maxaa ka dhexeeya
Sida an la wada socon markii la qabsay ciraaq waxaa ciidamadii ku soo duulay ciraaq ay bilabee in ay bahdilaan, quursi, xaqiraad kula kaceen dadkiii ay madie u isticmaalyeen in ay xoraynayaa taas oo ka soo shaac baxday ilahay daaha ka rogay waxashanimadii ay kula keceen dadkiin maskiinta ahaa ee muslimka ahaa oo ay ugu yimaadeen dhulkooda.
Sida uu qofkasta u famahay dhacadii lagula kacay dadkaas waxaan anigu u fahmahayaa in ay tahay xadaarad cusub oo reer galbeeed laguna soo kordhiyay calamaka loona isticmaalyo muslimiinta taas oo marka hore loogu yeerayo argagixiso kadibna lagu sharciyaysanayo in sidii la rabao laga yeelayo taas oo ah in qofkii la rabo la dili karo la qaadanayo hantidoo haweeka ismaalkana sidii la rabo laga yeelayo.
Hadii aan u soo noqdo ujeedada qoralkaan waxaa dhawan taan laga soo qoray hargaysa oo ku saabsan gabadh yar oo haboow ah taas oo raadinaysay abtigee oo ah dadka durbaanka beenta ah ee gooni u goosiga somaliland luugu tumay waqooyi galbeed ee somaliya taaas oo ku soo hormartay madaxwayna ku xigeen sheega ee cabsida iyo nacaybku ay daashatay in lagula kacay sharcigi ay dajisteen dadkaan ilbaxnimada waalan lasoo caashaa baxay waxaa moodaa in ay caalamaka u qaybiyeen sidii loo fulin lahaa qorshaas aan ka soo hadlay inkatoo calaamaka islaamka laga fulyo qayb ka mid ah sida dilka, xadhiga iyo hadatida oo la dhaco, halka hargaysa ay ka fulinayso dhamaan sida kufsigii, jirdilkii iyo intii kale oo uu faraya sharcigii la amray calaamaka waxaase anigu la yaabay waxa ay u wada fulinayaa maamul ku sheeg hargaysa:
Ma waxay ka wadaa reer galbeed ha idin nognaalden oo ku soo jiita.
Ma waxay ka wadaan wadadii gooni u goosiga aya hada hesheen
Ma waxaay ka wadaan reer galbeedka waxay ka faaiidaan ha ka qadinan
Ma waxay ka wadaan somalida ehelka ah ayay idin ku soo qaldamin
Ma waxaay ka wadaan anagaa ha dadka islaamka ah oo sidiina oo kale wax u fulin kara ee na soo eega
Waxaase waxa la layaabo ah in gabadh 18 jira, cabsi in taa la eg inta laga muucjiyo in sidaas loo la dhaqmo. Waxaase moodaa in sawirana la ga qaaday markiin la fara xumaynaya gabadha si loogu leho abaalmarin ilaa waxaa wax loo fuliyay sidii ay gaaladu wax uga fulinayeene xabsigii caaan baxay ee abu quraby kaas oo aha kufsig, jirdil iyo sawiradii lagu mujinayay in ay hawshii u socoto sidii meesha loo tagay in ay ahay sidaas. Marka Waaa yaabe maxaa ka dhexeeya hargaysa iyo xabsigii abu qurayb waxaa la orankaraa waxaa ka dhexeeye waa wareeegtadii laga soo saaray pentigoonka maraykanka ayaa soo wada gaaratay labada meeladood.